Care Khabar प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्न – बाहिर राष्ट्रवादको डंका पिट्ने, भित्रभित्रै लत्रिने ? - carekhabar.com
९ मंसिर २०७६, सोमबार १०:१५ मा प्रकाशित
८ मंसिर, पोखरा
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘हिजो कसैले थाहा नपाउने गरी डिप्लोम्याटिक नोट लेखेर पठाउनुभएको छ रे । त्योबाहेक अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पहल गर्नुभएको छैन । तर बाहिर देखाउनका लागि मैले भारतीय सेना फिर्ता लैजाऊ भन्दिएँ भनेर डंका पिट्नु भयो ।’